Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်)
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) Brand Name(s): Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်).
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
[ယေဘူယျအသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
Zinc oxideကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Zinc oxideကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Zinc oxideဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Zinc oxideကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ဆေးဝါးအများစုကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းခြင်းတော့မပြုလုပ်ရပါ)
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် ××× ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
• D= ဆိုးကျိုးများရှိသည့်အထောက်အထားများရှိပါသည်။
• X=သောက်သုံး၍မရပါ (လုံးဝမတည့်ပါ)။
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zinc oxideဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Zinc oxideကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓာတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zinc oxide ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓာတ်ပြုမှု တွေရှိနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှု ပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အောက်ပါအခြေအနေများရှိနေခဲ့လျှင် ဖြစ်ပါတယ်။
•	ဆေးလိမ်းရမည့်နေရာတွင်အနာကြီးကြီးမားမားရှိခြင်း၊အရေပြားပေါက်ပြဲနေခြင်းသို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောအရေပြားထိခိုက်ဒါဏ်ရာရှိနေခဲ့လျင် ……….. အဆိုပါအခြေအနေများရှိနေခဲ့လျင်ဆရာဝန်နှင့်မတိုင်ပင်ဘဲဤဆေးကိုမသုံးစွဲသင့်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Zinc oxide ၃၀%လိမ်းဆေး :အပေါ်ယံအရေပြားကိုလိုအပ်သလိုလိမ်းပေးပါ။
အတွင်းခံ/ဆီးခံ diaper လောင်ခြင်းအတွက်
Zinc oxide ၁၀%ခရင်မ်
Zinc oxide ၁၀%လိမ်းဆေးရည်
Zinc oxide ၁၃%ခရင်မ်
Zinc oxide ၁၃%လိမ်းဆေးရည်
Zinc oxide ၁၁.၃%ပါဝင်သောလိမ်းရသည့်ဆေးတောင့်(နှုတ်ခမ်းနီတောင့်နှင့်အလားတူသည်)
Zinc oxide ၃၀%လိမ်းဆေးရည်
ကလေးတွေအတွက် Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Zinc Oxide (ဇင့် အောက်ဆိုက်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
•	သွားတိုက်ဆေးကဲ့သို့ခပ်ပျစ်ပျစ်ပုံစံ (paste)
•	ဆေးပတ်တီးပုံစံ (Dressing)
Zinc oxideကိုသုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Zinc oxide https://www.drugs.com/cdi/zinc-oxide- cream.html. Accessed July 15,2016.
Zinc oxide http://www.everydayhealth.com/drugs/zinc-oxide- topical. Accessed July 15, 2016.
Zinc oxide http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 982-zinc.aspx?activeingredientid=982. Accessed July 15, 2016.Zinc oxide https://www.drugs.com/cdi/zinc-oxide- cream.html. Accessed July 15,2016.
Zinc oxide http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 982-zinc.aspx?activeingredientid=982. Accessed July 15, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇှနျ 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုငျ 9, 2017
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကိုယ်ဝန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း